रक्सौल पुग्छन् हेटौँडाका घुमुवा | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
हेटौँडा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरका एसपीले राखेका घुमुवाहरू रकम असुल्न कै लागि वीरगञ्जदेखि भारतको रक्सौलसम्म पुग्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा जोडिएपछि एसपी विकासराज खनाल यतिबेला निलम्बनमा छन् । उनीपछि लोकेन्द्र श्रेष्ठ मकवानपुर प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका छन् ।
लोकेन्द्र श्रेष्ठको विगत पनि त्यस्तै विवादित र निलम्बितको छ । उनी प्रहरी निरीक्षकका रूपमा तत्कालीन वडा प्रहरी कार्यालय, जनसेवा (काठमाडौँ)मा कार्यरत रहँदा सुनकाण्डमा नै निलम्बन हुन पुगेका थिए । तत्कालीन आइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधानको नातेदार भएकै कारण लोकेन्द्र श्रेष्ठ जनसेवाको प्रहरी प्रमुख भएका थिए । त्यतिबेला पनि एयरपोर्टबाट सरकारी संरक्षणमा नै ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुने गर्दथ्यो । निरीक्षक श्रेष्ठ सुनकाण्डमा निलम्बनमा परेका थिए । पछि उनी मुद्दा जिती बहाली भएका हुन् । संयोग, एसपी विकासराज खनाललाई ३३ किलो सुुनको अभियोग लाग्यो भने सुनकै अभियोग लागेका लोकेन्द्र श्रेष्ठ पुनः मकवानपुरको एसपीका रूपमा आएका छन् । एसपी जो आए पनि हेटौँडामा घुमुवाहरूको आतंक व्यापक रहेको छ ।
दरबन्दी जहाँ परोस्, प्रहरी निरीक्षक मधु थापा हेटौँडा छोड्दैनन् । उनको ससुराली हेटौँडा भएकै कारण कहिले वडा प्रहरी, कहिले जिल्ला प्रहरी, कहिले क्षेत्रीय प्रहरी त कहिले हेटौँडा बाहिर दरबन्दी परे पनि उनी हेटौँडामा नै कार्यरत रहन्छन् र अहिले उनकै नेतृत्वमा हेटौँडा प्रहरीमा घुमुवा टोली रहेको छ । असई हिटबहादुर कटुवाल, प्रज रामकुमार ढकाल र धनबहादुर विक पनि घुमुवा टोलीमा संलग्न छन् । असई कटुवाल धेरै विवादितमात्रै होइनन् कि बदनाम पनि छन् ।
उनलाई कार्यालय प्रमुखले रकम असुल्नकै लागि प्रयोग गर्ने गरेको समेत खुलेको छ । यी घुमुवाहरू लामो समयदेखि हेटौँडामा कार्यरत रहेकै कारण तस्करदेखि व्यापारीहरूसँग नजिकको चिनजान, उठबस रहेको छ, जसका कारण उनीहरूले आफ्नो र हाकिमका लागि खुलेआम रकम असुल्दै आएका छन् । त्यसैगरी इलाका प्रहरी कार्यालय, पशुपतिनगर रातमाटेका प्रहरी निरीक्षक अनुपजंग रायमाझीले पनि रकम असुल्नका लागि हवल्दार देवशंकर पटेललाई प्रयोग गरिरहेका छन् । देवशंकर पटेल लामो समयदेखि रातमाटे चेकपोष्टमा कार्यरत रहेका छन् । उनी सिभिल ड्रेसमा घुमुवाका रूपमा परिचालित हुन्छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक जिम्मेवार अधिकृतले बताएअनुसार पटेलको सम्बन्ध ठूला ठूला दुई नम्बरी तस्करहरूसँग रहेकै कारण उनी कहिलेकाहीँ रकम असुल्न वीरगञ्ज र रक्सौलसम्म पुग्ने गर्दछन् । यसअघि यसरी रकम असुल्ने काम सिपाही नाजिर हुसेनले गर्ने गर्दथे ।
यो पनि पढ्नुहोस सागमा नेपालकाे स्वर्ण पदक संख्या १०० पुग्याे !
धेरै बदनाम र उजुरी परेपछि सिपाही हुसेन अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयअन्तर्गतको उजुरी छानविनमा अनुसन्धानका लागि तानिएका छन् र उनलाई १ नम्बर गणमा राखिएको छ । तर, हवल्दार देवशंकर पटेल भने तानिएका छैनन् । यी घुमुवाहरूका कारण हेटौँडामा मात्र नभई हेटौँडा क्षेत्रमा प्रहरीको बदनामी नै भएको छ । आमूल परिवर्तनको कुरा गर्ने आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले यसतर्फ ध्यान दिएलान् कि भन्ने आशा यहाँका व्यवसायीहरूको रहेको छ ।
२८,बैशाख.२०७५,शुक्रबार १०:४० मा प्रकाशित
← विमानस्थल केहीबेर बन्द !
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुरमा रक्षामन्त्री पोखरेलले स्वागत गरे →